Chirungu Montreal School Board (EMSB) | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Zvirongwa zvePathwayChirungu Montreal Chikoro Board
Nzira yako yekuCanadaChirungu Montreal Chikoro Board
Iine huwandu hwevadzidzi vevanopfuura makumi manomwe nemazana manomwe, iyo Chirungu Montreal School Board (EMSB) ndiyo yakakura yeChirungu chikoro chehurumende bhodhi muQuebec. Yakatangwa muna Chikunguru 44,000, apo dunhu rakagadzira mabhodhi matsva pamwe nemitauro yemitauro, network yayo inosanganisira Zvikoro makumi manomwe neshanu. Ndivo vakasarudzwa dare remakurukota iyo inofambisa zviitiko zveEMSB. Iyi inhengo gumi nembiri inotarisira bhajeti remadhora mazana matatu emamiriyoni emadhora. Mari iyi inopihwa kuburikidza nemahomwe kubva kuhurumende yematunhu uye, zvishoma, kuburikidza nemitero yechikoro chemunharaunda. EMSB zvikoro uye nzvimbo zvinoshanda zvakabatana mabhodhi anotonga, iyo inoumbwa nenhamba yakaenzana yevabereki nevashandi, pamwe nemukuru kana mukuru wedare. Mukuwedzera, vamiririri venharaunda uye vadzidzi mu kutenderera kwechipiri kwechikoro chepamusoro nhengo dzedare rinotonga, asi havana kodzero yekuvhota. Iko zvakare kune EMSB Dare revabereki.
Basa reChirungu Montreal School Board kutsigira zvikoro zvaro nenzvimbo mukuedza kwavo kudzidzisa vadzidzi mukati mevanhu vane hanya, vakachengeteka uye vanobatanidza kudzidza munharaunda.
Kuti izadzise basa rayo iyo EMSB icha:
Ziva uye ukoshese kusiyana kwakaita nharaunda yayo
Ipa vadzidzi vese mukana wekuvandudza matarenda avo uye kuwana kwavo pachavo
Ziva hunyanzvi uye kugona kwevashandi vayo uye tsigiro yavo yekuenderera mberi kwehunyanzvi
Kurudzira kushandira pamwe pakati pevakasiyana-siyana vekudyidzana
Shandisa zviwanikwa zvinobudirira uye zvine hunyanzvi kubatsira zvikoro nenzvimbo kuti dzitarise basa rekurayira, kushamwaridzana uye kugona
Kurudzira kudzidza kwehupenyu hwese uye kufunga kwakasimba
Chirungu Montreal Chikoro BoardMamwe mashoko
BLI Chirungu chikamu 8
Professional Kubheka uye Kugamuchira Vaeni
Iyo Nyanzvi Yekubheka chirongwa chinogadzirira vadzidzi kuti vadzidze kutengeserana kwenyanzvi cook.
Kazhinji kutaura, nyanzvi dzinobika dzinoita mabasa ane chekuita nekugadzirira, kushandura, kushandira uye kuchengetedza chikafu. Ivo vanoshandirwa mumaresitorendi, mahotera, zvipatara, hutano hwekuchengetedza hutano, nzvimbo yepakati yekudya, masangano edzidzo uye kumwe kwakatangwa. Vanogona zvakare kushanda ngarava, nzvimbo dzekuvaka, dzevatakuri, dzekugadzira chikafu, nezvimwewo Dzimwe nguva vanoshanda vari pasi pesimba remubiki.
Nguva yechirongwa maawa 1 470 maawa, ayo anosanganisira maawa mazana mapfumbamwe nemashanu anoshandiswa pane humwe hunhu hunodiwa kudzidzira kutengesa kana kugara uye maawa mazana mashanu nemakumi mana, pane hukama hwakanangana nebasa. Iyi purogiramu yekudzidza yakakamurwa kuva makumi maviri nemaviri emakombiyuta ayo anosiyana pakureba kubva pamakumi matatu kusvika maawa 930. Maawa akazara akagoverwa kuchirongwa anosanganisira nguva yakapihwa kudzidzisa, ongororo yekudzidza nekuvandudza kana mabasa ekugadzirisa.
Chikafu uye Chokunwa masevhisi
Kuti uone kukodzera kwavo basa uye maitiro ekudzidzisa, kutora nzira yakatarisana nevatengi, kugadzirira mise en enzvimbo uye yekudyira, kutsanangudza menus uye mundiro, kutora nekutora odha, kugamuchira nekupa ruzivo muFrench. kuita mabhiridha uye basa rekuunganidza, kukurudzira uye kushandira waini, kupa chinwiwa basa, kupa mabiko basa, kupa zvisina kujairika basa, kupa basa rakarongeka, uye kubatana munzvimbo yebasa.
Computer uye Technology
ZVINOGONESESA SYSTEMS ELECTROMECHANICS
Wana ruzivo, kugona uye maitiro anodiwa kuti avimbise kushanda uye kuchengetedza michina yekugadzira michina nguva yese iyi uchiremekedza shanduko yemhando uye tekinoroji, kugadzirisa dambudziko, kugadzirisa masisitimu akasiyana uye zvikamu, hydraulics, pneumatics, magetsi nemasekete emagetsi, vachishanda mumakambani akasiyana anoshandisa automated masisitimu.
DZEMAHARA DZEMUSORO (CAD)
Kugadzira hunyanzvi hunodiwa kuti uwane ruzivo rweku sanganisira pane dhiziri, senge: kugadzirisa matambudziko ane chekuita nekunyora kwemaindasitiri, kutora nekuturikira zviyero; kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti unzwisise kugadzira, akadai se: kududzira ruzivo rwehunyanzvi hwakanangana nezvezvinhu uye zvigadzirwa zvekugadzira, zvichiratidza kurongeka kwezvikamu uye masisitimu emagetsi esitima; kukudziridza hunyanzvi hunodikanwa kududzira, kuita, uye kururamisa dhirowa uye kugadzira maseketi, kushandisa mabasa akasarudzika ekombuta- anobatsira kunyora chirongwa, kuburitsa ruzivo rwezviratidziro zvezvimiro zvemukati mechimiro, musangano, michina, kuisa mapaipi uye wedunhu dhidhiya, kugadzira matatu- dhizaini dhizaini uye kugadzira yakapfava technical chinhu; kukudziridza hunyanzvi hunodiwa hwebasa revanhu vazhinji-rekuranga uye kubatanidza muchikoro uye hupenyu hwebasa.
Kugadzira muvadzidzi hunyanzvi hwekuita mashina ekuita machina, kuita michina yekuita pamishina yemuchina, kuita mabasa ehurongwa, kuita mashandiro pazvishandiso zvemashini ekuverenga manhamba, kutora chikamu mukushandira muzvikwata zvakawanda uye kubatanidza zvakabatana mu chikoro uye nzvimbo dzekushanda.
DESKTOP DZIDZISO (DZEMAHARA
Vagadziri vemakomputa mifananidzo vanoshandira makambani anoshanda mumagadziro ekutaurisa, multimedia uye zvikamu zvemakambani, zvinosanganisira magazini, mapepanhau, makambani anotakura, vagadziri vezvimwe zvigadzirwa zvekudhinda, Vagadziri veWebhu saiti uye vanogadzira zvigadzirwa zvemagetsi. Computer magirazi magadzirirwo vanogonawo kuzvishandira.
Ivo vanogadzira mapepa ekugadzika emapeji uye anogadzira marongero emapeji Basa ravo rinosanganisira kurongedza mifananidzo uye zvinyorwa, vachivabatanidza muzviratidziro zvemapeji uye kugadzirira marongero ekudhinda uye kutepfenyura multimedia vachiri kuona kuti vanosangana nehunyanzvi hwekuparadzira zviyero.
DZIMAMBO DZVINONYANYA uye kuprinta
Dzidza zvese zvikamu zvekutengeserana kwekudhinda kubva pakombiyuta kuisa kune inoshanda offset uye screen michina pamwe nekupedzisa uye nzira dzekusunga. Tora maoko-pane chiitiko chinokupa iwe kumucheto kwevashandi. Kana wapedza, kunzwisisa kwako kwese kuprinda kudhinda, kugadzirisa michina, pepa, inki, firimu, kubvisa mitsetse, uye software yekushandisa inoita kuti iwe ugone kupinda munyika yekudhinda nechivimbo.
KUTENDA KUTENDA UYE KUTengesa
Iyo Yekufambisa Yekutarisa uye Yekutengesa chirongwa inovavarira kudzidzisa ekufamba vatengesi vatengesi. Basa iri rinosanganisira kudyidzana nevatengi, kugadzirisa zvinodiwa uye zvinotarisirwa uye kutsanangura zvinopihwa zvekufamba uye masevhisi masevhisi. Murairidzi anozokwanisa kupa ruzivo pamusoro penzvimbo, nzira dzekufamba, pekugara uye nemitengo inosanganisirwa zvese nechinangwa chekutengesa zvigadzirwa zvekufambisa nemasevhisi. Murairidzi anozoita manejimendi mabasa sekuchengetera, kubhadharisa pamwe nekubatanidza muripo wezvigadzirwa zvakatengwa uye kugadzirira mafambiro ekufambisa. Unyanzvi hwakanakisa hwevatengi hunotarisirwa.
Mupi wezano anotarisirwa kutengesa mapakeji ekufamba pamwe neakagadzirirwa zvigadzirwa zvekufamba (zvakadai sezuva, tsika, hutano, kushambadzira, mitambo, ecological, nezvimwe kuenda), nzendo, bhizinesi uye zvirongwa zvevashanyi. Iye anozopa zvakare mafambiro ekufambisa uye pekugara, uye inishuwarenzi yekufamba. Iyo huwandu hwezvigadzirwa zvekufamba uye masevhisi akatsanangurwa nemasangano anogara achishanduka.
Basa reiye mupi wezano wekufambisa rine zvakare kuzivisa mutengi nezve mamiriro ekufambisa akadai seizvo zvinodiwa kuti upinde uye kubuda nyika, mari yekune dzimwe nyika uye mitengo yekutsinhana, kuchengetedza vafambi, nezvimwe.
Bhizinesi uye Kutonga
Kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti upedze mabasa ezvekuverenga mari akadai: kuverenga uye kugadzirira mabhiri, mavovoice, marisiti, kubhadharisa, nezvimwewo zvebhizinesi, kubata muhomwe mari, kuburitsa muripo, kuverenga mitengo, kunyatso kupedzisa uye simbisa basa rezuva nezuva rekuverenga mabhuku, kupedzisa kupera kwemari uye kupera kwegore mabasa, kugadzira mutero wemari mafomu, uye kugadzira accounting system.
Munyori uye Rubatsiro
Kugadzira muvadzidzi kugona kunodiwa kushandisa zvinotevera zvirevo, mitemo uye nzira: kubatana zvakaringana muchikoro uye munzvimbo dzekushanda; kuverenga zvinyorwa zvebhizinesi; kushandisa nzira yekukodha; kubata ruzivo rwekutonga; kunzwisisa uye kuona nzira dzakasiyana-siyana dzekutarisira mhando; kubata nguva yavo; kugadzira chimiro chinooneka chegwaro; kunyora tsamba yebhizinesi; kushandisa database software; kushandisa izvo zvakakosha mabasa ekugadzirisa izwi software; kushandisa izvo zvakakosha mabasa easpreadet software; kushandisa basa repamberi peshoko kugadziriswa kwesoftware; kushandisa telecommunication zvishandiso; kutaurirana mubhizinesi mune muhofisi mamiriro; kubata kutaurirana nemitauro miviri muhofisi muhofisi; kugadzira uye kugamuchira tsamba yebhizinesi; kugadzira zvinyorwa; kubata zvikumbiro zvine chekuita nemitemo yevashandi; kugadzirisa mafaera; kugadzirira misangano yebhizinesi; kuita zvinowanzoitika uye zvenguva zviitiko zvekuverenga mabasa; kugadzira kunyorerana kwebhizimisi muchiFrench; kushandura runyoro rwebhizimusi muchiFrench.
DZIDZO DZEMAHARA - LEGAL
Chirongwa cheAVS, Chakavanzika Chidzidzo-ZveMutemo, chakagadzirirwa kudzidzisa vadzidzi kushandisa basa remunyori wezvemitemo. Mabasa makuru emunyori wezvemitemo kugadzira magwaro anodiwa nemagweta, notariari kana vamwe vanhu mubazi rezvemitemo mumabasa avo ehunyanzvi. Zvakare, vanyori vemitemo vanowanzoita sevabatsiri kune vakuru vavo. Vanonzi zvakare vaite basa rekuchengetera mabasa akavanzika muchirongwa rinotungamira kuDVS (diploma yeVocational Studies) muSecretarial Study.
Vazhinji vanyori vezvemitemo vanoshanda kumafemu ezvemitemo kana vanyori, nepo vamwe vachishandira matare epamutemo emakambani makuru, ezvemateru, ehurumende yemubatanidzwa kana yeProvince kana evatapi venzvimbo
Vanyori vezvemitemo vanofanirwa kuve vanobereka kwazvo uye vanokwanisa kushanda vari pasi pekumanikidzwa, vachipiwa kukosha kwemipimo yenguva uye nekukurumidza kwevamwe mafaera. Sevanyori vezvemitemo vanowanzobatidzana nevatengi, ivo vanofanirwa kunge vakanyanya kutaura nekumisidzana hukama. Sevabatsiri, ivo vanofanirwa kuchengetedza hunyanzvi hwekuzvibata, kunyanya mukuita kwavo kwakawanda uye nezve zvakavanzika.
Chirongwa cheAVS, Chakavanzika Chidzidzo-ZveMutemo, chinobatsira vadzidzi kuvandudza hunyanzvi hunodiwa pakubata basa uye kugona hunyanzvi hunodiwa munzvimbo yebasa munzvimbo yepamutemo. Iyi dzidziso inotora hanya nezvese kugona kunosanganisirwa muDVS muSecretarial Study. Mukufarira kweenderera mberi nekubatana, iyo Secretarial Zvidzidzo-Zvirongwa zvepamutemo inofarira kuwanikwa kwemunyori wezveunyanzvi.
KUBATSIRA MUDZIMA CHEMA CHETE
Rubatsiro muHutano hwekuchengetedza Zvivakwa, zvinozivikanwa sekuti, “PAB” préposé aux béneficiaires inogadzirira vadzidzi kuita basa rekuchengeta mukoti kana muchengeti wepamba rekuchengeta uye kuita zviitiko zvakasiyana siyana zvebasa zvichienderana nekuti basa rakarongwa sei.
Vapindi vanoona kuti michina inodiwa yekurapa nezviridzwa zviripo uye inochengetedzwa nemazvo. Vanopinda vanodzidziswa kuzadzisa zvido zvevatengi, kuvabatsira kudzikamisa hurema hwavo, kutungamira nekuvatsigira pakuchengetedza kana kudzosa kuzvitonga kwavo uye hutano hwakanaka. Kana vachiita mabasa avo, varindiri vanogara vachiwonana nevatengi vavo. Ivo vanoshandawo pamwe chete nezvikwata munzvimbo kuti vape mazano uye vagovane zviono maererano nehutano, maitiro uye zvido zvevatengi uye nevari padyo navo.
Vanopinda vanodiwa kuti varambe vachichinjira kumamiriro ezvinhu anoshanduka, vachipiwa kusagadzikana kwevatengi, uye nokudaro vanofanirwa kupindira nekungwarira uye kutonga pamwe nekutarisisa zvakanyanya shanduko mune dzevatano mamiriro. Vapindi vanofanirwa kubata zvinobudirira nekumanikidzwa, kuve vanochinjika uye kuve vanokwanisa kujairana neiyo chaiyo yekiriniki yechengetedzo unit.
Kudzidziswa uku kunogadzirira mudzidzi kuve pharmacy technical assist, achishanda ari pasi pekutarisirwa mufemesi kungava munharaunda yekuisa kana muhutano hwekugadzira hutano hwekutangisa.
Basa rakanyanya remubatsiri wefekinoroji kubatsira iwo wemafemesi mukupa mishonga, kuchengetedza nekugadzirisa mafaira evarwere pamwe nekuparadzira uye kutengesa kwemishonga uye zvigadzirwa zvemishonga. Iyo pharmacy technical assist zvakare inogadzira mishonga pasi pekutariswa kweiye mufesi.
Gadzira ruzivo, hunyanzvi uye maitiro anodiwa kuti ushandise hutsanana, hutano uye yekuchengetedza mitemo uye matanho akabatana nekushandiswa kwezvinhu zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa, ongorora ganda uye nevhudzi, kuraira vatengi nezvekuti ndeipi bvudzi ingavakwanise, nzwisisa nzira dzinobatanidzwa nebvudzi kuchenesa uye kukwanisa kuita mabasa akadai sekucheka, kurongedza uye kurovera bvudzi, kuita zvinogadziriswa mabasa akadai sekucheka ndebvu kana ndebvu, parutivi uye mabvu, kuita mabasa ekugamuchira uye ekutengesa.
Iyo aesthetics basa rekudzidzisa chirongwa inovavarira kudzidzisa aesthetists.
Sechikamu chemabasa avo, aestheticians vanopa kutarisika kwekushongedza kune vakasiyana vatengi, nerubatsiro rwehunyanzvi hunoshandisa zvigadzirwa zvakasarudzika nemidziyo, nechinangwa chekuvandudza nekuchengetedza chitarisiko chemunhu, uye izvi, zvakare zvinogadzira kugara kwepanyama uye kwepfungwa.
Asati atanga kurapwa, esthetician inounganidza ruzivo kubva kune mutengi. Ganda, zvipikiri uye nevhudzi remuviri zvinoongororwa sezvinodiwa.
Iyo esthetician inoita yekutanga kana chaiyo yekutarisa kukwezva kumeso, mutsipa, chipfuva, kumashure, maoko nemakumbo. Anesthitician inogona kuisa mafuta pachiitiko, uye inogona kubvisa bvudzi kubva munzvimbo dzakasiyana dzemuviri uchishandisa zvigadzirwa zvine hunyanzvi.
Uye zvakare, esthetician inopa kubvunza mabasa, inotengesa mapakeji ekutarisira, zvigadzirwa zvehunyodo uye mabasa akasarudzika. Ivo vanoronga uye vanoronga basa ravo, vanoita basa rekugamuchira, vanoona vatengi vachitevera, vachiita mabasa ekutonga uye nekutarisira nzvimbo yebasa nezvinhu. Aestheticians inoitawo chokwadi chekugara kusvika parizvino mukudzidziswa kwavo.
Bvudzi kubviswa (ELECTROLYSIS)
Iyo Bvudzi Kubvisa chirongwa chinogadzirira mukwikwidzi webasa mune electrolysis kana se laser bvudzi kubvisa nyanzvi. Iri basa rinoitwa mumakiriniki ekubvisa bvudzi uye salon, kana nyanzvi dzinogona kushanda dzakazvimirira.
Sechikamu chetsika yavo, nyanzvi dzekubvisa bvudzi dzinozivisa vatengi vavo pamabatiro akasiyana ekubvisa bvudzi uye kubvisa bvudzi kumeso, mutsipa kana muviri. Basa ravo rinosanganisira kusimudzira chitarisiko chemumwe munhu, kurapa dambudziko rebvudzi rakawandisa dzimwe nguva nekuda kwekugara nhaka zvikonzero kana dambudziko remakemikari, uye kusimbisa munhu ane kusagadzikana mumuviri, uye izvi, nguva yese iyi, kusimudzira pfungwa yemuviri nepfungwa zvakanaka- kuva.
Iyo nyanzvi yekubvisa bvudzi inoongorora kana mutengi akakodzera kurapa bvudzi kubvisa, anovaudza pane frequency inodiwa, iyo nguva, zvinotarisirwa mhedzisiro uye inopa zano. Ivo zvakare vanoita basa rekugamuchira, kutengesa zvigadzirwa uye masevhisi uye vanoita mabasa ekutonga zuva nezuva vachichengeta nzvimbo yavo uye zvinhu.
Chirongwa ichi chinoita kuti vadzidzi vakwanise kuita zvekudzivirira nekugadzirisa basa remuchina; kuongorora mota nechinangwa chekuratidza, kutsvaga chikonzero uye kwainobva matambudziko ekushanda; ita zvinogadziriswa, tsiva zvikamu uye gadzirisa pane akasiyana emotokari masisitimu; shandisa bvunzo; dzidza maitiro ekuisa zvinongedzo uye sarudzo yemidziyo; kuomerera kuhutano, kuchengetedza uye zvakatipoteredza mitemo nemirairo.
KUSIMBIRA UYE KUSHAYA
Kuwana zvinodiwa kuti upinde mumusika wevashandi; kuwana zvinodiwa kuti kududzira zvirongwa, zvakatemwa uye maitiro; kuwana zvinodiwa zvinodiwa kugadzirira uye weld simbi, isina stainless simbi uye aluminium zvikamu zvinoenderana maitiro akasiyana: SMAW, CTAW, GMAW, FCAW; kuwana zvinodiwa kuti uite, shandura uye kugadzirisa masangano; kushandisa mitemo yehutano uye yekuchengetedza basa. kudzora kunaka kwezvinhu zvakavakirwa.
Dzidza zvakakosha zvekugadzira kabhodhi zvigadzirwa, michina & chengetedzo pamwe nehunyanzvi hunyanzvi senge veneering uye kuveza. Maoko-pane basa rerojekiti ndiwo moyo wechirongwa. Vashandi vekudzidzisa vanobva kwakasiyana maindasitiri, kubva kutsika cabinetry, dhizaini dhizaini, kugadzirisa uye kudzoreredza, mafirimu seti, uye nzvimbo yekutenderera. Vadzidzi vedu vanoshanda muzvitoro zvikuru nezvidiki; kuvaka makicheni, hofisi fenicha, yezvokutengeserana mukati; vanopfekedza zvakavanzika majeti, vanodzorera zvekare, fenicha dhizaini uye vanodzidzisa vamwe.
Chirongwa cheCabinetmaking chinotungamira kuna DEP ingangoita gumi nematanhatu maawa. Chirongwa chezuva (1650 hrs / zuva): ingangoita mwedzi gumi nemina. Chirongwa chemanheru (6 hrs / manheru): ingangoita mwedzi 14.
Kugonesa mudzidzi kuwana zivo, hunyanzvi uye hunhu hunodiwa kuti uite mabasa sekupedza unoshandiswa uye fenicha nyowani; kusanganisa opaque mavara, kushandiswa kweanokosha mapedhi, kugadzirira kwematanda nzvimbo, wana ruzivo rwehutano uye yekuchengetedza mitemo uye matanho; ruzivo rwemitambo yemidziyo, uye kutanga bhizinesi diki.
Dzidza zvakakosha zvekugadzira kabhodhi zvigadzirwa, michina & chengetedzo pamwe nehunyanzvi hunyanzvi senge veneering uye kuveza. Chirongwa ichi chakanangana nemaoko pabasa reprojekti. Vashandi vekudzidzisa vanobva kwakasiyana maindasitiri, kubva kutsika cabinetry, dhizaini dhizaini, kugadzirisa uye kudzoreredza, mafirimu seti, uye nzvimbo yekutenderera. Vakapedza kudzidza vanoshanda muzvitoro zvikuru nezvidiki; kuvaka makicheni, hofisi fenicha, yezvokutengeserana mukati; vanopfekedza zvakavanzika majeti, vanodzorera zvekare, fenicha dhizaini uye vanodzidzisa vamwe.
Wakabudirira BLI Chirungu chikamu 8